Maitiro ekudzima makuru mafaera kana madhairekitori muLinux? | Linux Vakapindwa muropa
Imi mese munotoziva sei bvisa mafaera uye madhairekitori muLinux, zvese kubva kumaturusi anowanikwa kubva kudesktop nharaunda kuenda kune ayo atinopihwa kubva kugobolondo (senge rairo yekuti munhu wese azive, rm). Asi mune ino mini tutori isu ticha tarisa pamabatiro ekudzima data hombe, ayo anogara akati wandei GB pane yedu hard drive uye kuti zvingave zvinonakidza kudzima ivo kuti vatore imwe nzvimbo pane yedu yekuchengetera yuniti.
Kana tikabvisa data rine zvinyorwa zvemukati, izvi hazviwanzo kunetsa zvakanyanya, nekuti hazvireve mutoro mukuru pasisitimu kuronga kweI / O uye yekuchengetedza unit iri mubvunzo, pamwe nekudyiwa kukuru kwe RAM, kunyanya kana uchishandisa mamwe maturusi. Asi kana ari mafaira anorema kwazvo, senge mamwe mavhidhiyo ekureba uye muHD mune mamwe mafomati, kana dhatabhesi, madhairekitori ane zvakawanda zvemultimedia zvemukati, nezvimwewo, dambudziko rinokura mune inoenderana mamiriro, nekuti zvinotora chinguva chidiki zvimwe kuita maitiro kana uchibata nenzvimbo hombe.
Kune zvishandiso zvakaita shred uye safe-deletion kutora Zvekuchengetedzwa kwakachengeteka kwedata, asi kwete kuwedzeredza sisitimu zvakanyanya kana uchidzima dhata rinotyisa isu tinofarira kuraira kwedu kwehupenyu hwese, rm uyezve takabatana neumwe murairo unonzi ionice. Kana iwe usinayo pane yako distro, isai iyo ...
Ichokwadi inokuyeuchidza nezveumwe munhu wekare waunoziva, akanaka, zvakanaka hongu, ionice ndiyo yakanaka yekuisa uye kubuda, Kubvumira kupa pekutanga kuzvinhu zvakasiyana, kwete chete kudzima data, asiwo kumhanyisa mamwe mabasa senge kuendesa (kubvarura), kufambisa data, nezvimwe. Semuenzaniso, ndeipi nzira 3 yaizoita kuita rekubvisa basa kana system iri yemahara uye isu tisiri kuita mamwe mabasa ekutanga Semuyenzaniso:
sudo ionice -c 3 rm /nombre/fichero/o/directorio/a/borrar
Nhamba yega yega inoita zvakasiyana nazvo Ini / O scheduler kana scheduler. A 0 hachisi chinhu, 1 yenguva chaiyo, 2 yezvakaderera kukosha, uye 3 yeIDLE modhi. Kana isu tisingade kunonoka basa zvakanyanya, tinogona kuripa 2 uye richaitwa neimwe nzira nekukurumidza kupfuura munzira isina basa, asi harinonoke zvakanyanya kuita sekuriita munguva chaiyo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekudzima makuru mafaera kana madhairekitori muLinux?
Ubuntu inobvunza vashandisi vayo nezvekuti Gnome uye Ubuntu 17.10 vanofanirwa kuve sei